Jawaar Mohaamad: 'Namni tokkoofi lama yaada isaa namarratti fe'uun hin danda'amu' - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, OMN
Hayyuleen siyaasaafi maanguddoonni Oromoo ibsa waloo baasaniin, taatee gidduu kana uumameen walqabatee Qeerroofi Qarreen Oromoo mormiif daandiitti bahan yeroodhaaf dhaabanii manatti akka deebiyaniif dhaaman.
Ibsa waloo kanarrattiObbo Jawaar Mohaammad yeroon itti wal doorsisaniifi wal ajjeessan darbeera jechuun, adeemsi dhoksaafi shiraan deemamu, kanaan booda abadan hin danda'amu jedhe.
"Dorsisanii, sobanii, ukkaamsanii nama bulchuun hin danda'amu. Ummanni keenya humna ittiin qoosanis miti."
Diinonni nu facaasuufi gargar nu baasuu barbaada. Carraa kana fayyadamuu barbaadu kan jedhu Jawaar, "injifannoodhaan warra [likkii] galuu qaban [likkii] galchiteetta manatti gali" jechuun ergaa dabarseera.
Caayaa paartileen Oromoo ijaarame jalatti rakkoo jiru furuuf itti deemuuf jiraachuu kaasuun, "Wanta mudate kana kanaan dura dhoksinee turre, kanaan booda ukkaamamnee deemuun hin jiru," jedheera Obbo Jawaar.
Yeroo manatti deebitanis, yoomiyyu harka keessan daddachaaftanii hin taa'iinaa; ija tokko banadhaas rafaa jechuun Qeerroofi Qarredhaaf dhaamsa dabarseera.
Obbo Jawaar namni tokkoofi lama qophaa isaa yaada isaa nama irratti fe'uun hin danda'amu jechuun gaaddisa paartilee Oromoo tolfatan jalatti dubbii jirtu akka furachuuf jiran yaadachiiseera.
Erga jijjiiramni dhufetti Oromoon kumaatamaan hidhaa jiru kan jedhu Obbo Jawaar, amma warri hidhaa jiran hiikamuu qabu jedheera.
Humnoonni nageenyaa raayyaafi poolisii biyya kanaa nageenya ummataa eeguudhaaf qofa jedhee, ijoolleen eegdota isaa ajaja abbootii hirreefi shiraa didanii hojii gootaa hojjetanis galatatu malaaf jedheera.
Yeroo fudhannee mariyannee falmaa dhumaaf hanga isin beeksifnutti daandii cufame banaa, magaala qulqullessaa, kan wareegame awwaalladhaa jechuun Obbo Jawaar Mohaammad ergaa dabarsaniiru.
Obbo Galaasaa Dilboo
Dhibdee nu gidduutti dhalate, gooliin amma dhalate akka dafee dhaabbatu ibsa kennuuf dhufnee jedhan Obbo Galaasaa Dilboo.
''Mufii qabduu agarsiifteetta, gatii kaffalteetta kun gahuu qaba nagana qe'ee keetti deebi'uu qabda.''
Yeroon sabaan walittti nu buusan darbeera jedhan. Miidhaa diduu waan jiru jedhanii, walii keenya gidduutti diinummaan dhalatee waan harkaa qabnu nu harkaa dhahanii gara isa duritti nu deebisuu fedhan jiraachuu beekuu qabnaa jedhan.
Ibsi Obbo Shimallisa Abdiisaa abdii waan nutti horeef nagaa deebisuuf jireenya idileetti akka deebinu ta'uuf nagaana ummattoota waliin jiraannuufi biyya keenyaaf haa ta'uu jedhuun dhaaman.
Obbo Daawud Ibsaa ammoo bara 1914 Waraana Addunyaa tokkooffaa sababa itti jalqabe aggaammii Obbo Jawaar irratti gaggeeffame kana waliin akka walfakkaatu yaadatanii, aggaammiin ture sunis rakkiinoonnii heddun ummata Oromoorra gaahaa jiru jiraachuu akka ta'e ni beeknaa jedhan.
Furmaatni dhibdee kanaa gaaffii ummataa deebisuu, hidhamtoota hiiikuudhaa jedhan.
Sochiin ummatni gaggeessu ammoo nama nagaa kan hin tuqne, saboota biraa kan hin tuqneefi amantaa irrattii kan hin xiyyeefanne ta'uu akka qabu gaafatan.
Obbo Mulaatuu Gammachuu
Waan kana dura Oromoorra gahaa turetu irra gahee kan jedhan ammoo nama siyaasaa Obbo Mulaatuu Gammachuuti.
Yeroo ammaa kana kan geenye maanguddoo waggaa 85 fi daa'immanii dhabneerraa har'aas ijoolleen akka raafuu dhumaa jirtii jedhan.
Wanti kun akka itti hin fufne, tokkummaan akka dhaabatu gaafataniiru. Salphina guddaatu nurra gahee jedhan.
Nama keenyaan nu cabsaa jiru. Seenaa keessattis akkasuma turee jedhaniiru. Isuma duriitu deebi'ee hojiirra oolaa jiraa jedhan.
Mootummaanis mariin rakkoo furuu qabaa. Waliin teenyee dubbii furuu malee waraanaan akka hin milkoofne beekee gad taa'ee rakkoo Oromoo hiikuu qabaa jedhan.
Walhidhuufi wal ajjeesuun dubbiin hin furamuu jedhan.
Miseensonni waraana biyyaa saba keessanirratti harka keessan hin kaasiinaa, hin ajjeesinaa jechuun dhaaman.
Abbaa Nagaa Jaarraa
Abbaa Nagaa Jaarraa ammo nama lubbuu dhabeef gadda isaanii ibsanii, haqa falmachuun gootumaadha jedhan.
Waan amma dhalate kana ammoo dhaabuun barbaachisaadha jedhan. Warren nu diiguu, nu saamuu barbaadan hubattanii qaamni hundi waan kana dhaabuun baraachisaadha jedhan.
Mootummaan Oromoo Itoophiyaa bulchaa yeroo jirutti Oromiyaa keessatti ajjeechaan raawwachuun sirrii mitii jedhan.
Mootummaan rakkoo kana qawween osoo hin taane dhugaan dhaabsisuu irra jiraata jedhan. Hanqna dhaabbilee Oromoo keessa jirutti qaawwa kana uumees jedhaniiru.
B/J Kamaal Galchuu
Madda suuraa, OPanther
B/J Kamaal Galchuu Jijiiirama kana afaan guutuun jijjiirama jechuun na rakkisa jedhanii, jijjiirama kan jedhame kana Qeerroon aarsaa hedduun asiin gahee qaama amaanaa irra kaahateen ajjeefamuun garaa nama gubaa jedhan.
Agammiin tuffiidhaan nurratti raawwatame qaabsoon Qeerroon as gahe osoo fulla'ee bakka ka'eef gahee hin raawwatu turee jedhan.
Adaamaa yeroon dhufu namni dhumachaa jiraa jedhan. Kan Shaashamannees, Amboos rakkooo hammaataa jiru kaasanii, rakkoon kun sirrachuu qabaa jedhan.
Dogogorra mootummaan hojjeteen saboonni biraan tuffiin saba kanarratti ka'uuf saalfachaa hin jiruu jedhan. Kun sabab rakkoo saboota biroo ykn Oromoon osoo hin taane rakkoo mmoootummaatii jedhan.
Waan hunda baannee, obsinee deemuun tuffiifi dhumuuf sababa erga ta'ee walii bahuu dandeenyaa jedhan.
Gaaffiin keessan siirriidha, jijiiiramichi daandii gadhiisuun sirriidhaa obsuun garuu gowwummaa mitii jedhan.
Qaamoleen mootummaa karaa sirrii hin taane kanarra deemuuf murannoo qabaachuu agarsiiseera jedhaniiru.
Bifa amma adeemaa jiruun haallii yoo itti fufe kan miidhamu paartilee biyya bulchaa jiraniidhaa jedhan.
Ollaa gaarii ykn lammii biyya tokkoo taanee itti fufuuf wal kabajuun barbaachisaadha jedhan.
Amma kaanee mootummaarra fincila gaggeessuu hin feenuu yaaada dhiyeessaa jirraa jedhaniiru.
Taankiif waraannii aangoorra nama hin tursu amantaa uummataa malee jedhan.
''Qeerroon amma wareegama kafaltan dhaaba, daandii isaan irra akka deemnu fedhan irraa gabaabsuu qaba," jedhan.
"Akka inni hin yaadnetti yaaduu dhiiste jedhanii halkan namatti seenanii nama ajjeesisuun salphina. Mootummaa keessaadha ajjeechaa lubbuudhaaf ODP keessatti doorsifamaa jiru."
Oromoon mataa gadi qabatee, waan hunda sodaaf miti; mataa gadi qabachuun gowwummaas miti, jedhe B/J Kamaal.
Ibsa haala yeroorratti kennaniin abbootiin amantaas Qeerroofi Qarreen tasgabbaa'uun naannoo isaaniitti nageenyi akka deebiyuuf waamicha dhiyeessaniiru.
Ummanni bakka hundaatti dacha'ee bahee gaaffii sirnaafi kabajaa isaaf malu gaafatee qajeeltootti dhiyeeffataa jira. Aggaammii fokkisaa qaroo Oromoorratti taasifame sagalee tokkoon bahee isa dhaga'uuf ergaa dabarseera.
Hiriira mormii kana keessattis lubbuun darbeefi qabeenyi manca'e kan haalaan nama dhukkubsudha jedhan abbootiin amantaa kunneen.
Kanaaf, hayyalaallattoonni duruu tokkummaa Oromoon isaan rifachiisu carraa hiriira mormii kana fayyadamuun walitti bu'insa kallattii jijjiiruun kan amantaafi saboota gidduutti taasifamaa jiru fakkeessuuf bakka gara garaatti gurmaa'anii socho'aa waan jiraniif kana irratti damaqamuun barbaachisaadha jedhaniiru.
Kanaaf, amarraa qabanii ummanni Oromoo hiriira mormii itti jiran dhaabanii akka manatti deebiyaniif dhaamaniiru.
Filannoo Itoophiyaarratti taateewwan yaaddessoo 300 ol mirkaneeffachuusaa gamtaan waldaalee siiviilii hime